Gudniinka Dumarku waa sharci daro Australia gudaheeda
Gudniinka Dumarku waa dhaqan caadaad soo jireen ah. Waa goyn ula kac ah oo la goynayo xubnaha dibada ama bedelida unugyada dibada ah ee taranka la xiriira. Gudniinka dumarka waxaa mararka qaarkood loogu yeeraa Goynta Xubinta-la- xiriirta Taranka dumarka ama dhaawicida/Goynta Xubinta Taranka ee Dumarka. Gudniinka dumarku faaiido uma leh caafimaad dumarka wuxuuna saamayn xun ku yeellan karaa galmoodka iyo xubnaha taranka caafimaadka. Waxaa jira Australia barnaamijyo la shaqeeya dumarka, dhalinyarada iyo ragga si ay u siiyaan kaalmo iyo macluumaadka bulshada dhaqan ahaan sameeya gudniinka dumarka.
Waxay ka soo horjeedaa sharciga in:
La gooyo ama laga saaro qayb ka mid ah qaybta taranka
La tolo ama dib-u-tolida lagu sameeyo qaybta taranka dumarka
La yareeyo furitaanka siilka
La jaro ama la saro kintirka
La dhaawaco ama loo geysto dhaawac xubnaha taranka dumarka
Sharcigu wuxuu mamnuucayaa in:
La gooyo dumar, ama gabar ka yar 18 sanadood
Qof laga kaxeeyo Australia si loo soo gudo/gooyo
In la caawimo in uu qof u geeyo Australia dibadeeda si loo soo gooyo/gudo
Qofku sharciga ayuu jebinayaa haddii uu:
Ka caawimo qaliin
Soo hello qof sameeya qaliinka
Gudniinka dumarku wuxuu sababaa ciqaab dhan 21 sanadood oo xarig ah.
Gudniinka dumarku wuxuu keenaa dhibaatooyin caafimaad oo muddo dheer ah mid gaaban:
Xanuun aad u daran
Nabar ama haar
Nabaro ama haaro ku samaysma neerfayaasha
BInfakshanka kaadimareenka iyo kaadi haysta
Xanuun markaad kaadshayso
Xanuunka waqtiga galmoodka iyo caadada
Dhibaatooyinka ilma dhalida, sida go’itaanka barta u dhexaysa futada iyo siilka ka dib marka la giijiyo furitaanka siilka iyo haarta
Asalka gudniinka lama yaqaan lama xiriiro diinta. Noocyada gudniinku waa kala duwan yahay qawmiyadaha dhexdooda. Wadamada adduunka ka jiraa waa iska daayeen dhaqankaan waxayna ka dhigeen sharci daro. Waa muhiim in aan ka hadalo wixii ku saabsan dhaqan raaca. Waan jecelnahay dhaqankeena laakiin waxaan awoodnaa in aan ka tagno haysashada dhaqan keeni kara khatar.
Waxaa jira adeegyo kaalmayn ah oo dumarka, gabdhaha iyo qoysaska reer Australia.
Si aan u ilaalino unaxafidno jirkeena, waxaan u baahanahay dhamaanteen in sharaf leh naloola dhaqmo oo naloo ixtiraamo. Tani waa xuquuqda qof walbaa leeyahay. Waxaa jira kaalmayn, talo, iyo macluumaad laga helli karo dhamaan dawlad goboleedyada iyo territoriska wixii la xiriira gudniinka. Arag hoos meelaha lagala xiriirayo adeega kuugu dhow:
U-qaybsanaha Kalkaalisada Caafimaadka ee CALD
Sarkaalka Barashada Caafimaadka ee Sarre
Samafalha Qorshaynta Qoyska
Xiriiriyaha Mashruuca caafimaadka Dumarka ee Dadka Dhaqamada-kala duwan
Shaqaalaha Horumarinta Bulshada